Umkhuleko Wokuhlukanisa Abantu Ababili? [Ukuhlukanisa okuchazayo]
Umkhuleko wokuhlukanisa abantu ababili iSan Alejo Rapido isebenza kulezo zimo lapho umndeni wethu, ukuzinza kwethu ngokomzwelo nangokomzwelo noma inhlalakahle yezingane zethu noma umlingani wethu isengozini.
Isibonelo, ecaleni elithile lapho umlingani wethu efunwa imisebenzi esikholwa ukuthi ngeke isizuzise, ​​kepha kunalokho, kuzomlimaza, khona-ke lesi sigwebo sivumelekile.
Ezimweni esetshenziswa kakhulu kuzo, ukuhlukanisa umuntu esasihlala naye nomlingani wamanje ohlose ukukwazi ukubuyisa ubudlelwano ebesinabo noma avimbele umlingani wethu ukuthi asishiyele omunye umuntu.
1 Ngabe umkhuleko wokuhlukanisa abantu ababili usheshe usebenza njalo?
1.1 Umkhuleko kuSan Alejo wokuhlukanisa abantu ababili nakanjani
1.2 Umkhuleko wokuhlukanisa abathandi nakanjani
1.3 Thandazela abantu ababili ukuba balwe futhi bazondane
1.4 Umkhuleko wokugcina wokuhlukaniswa
2 Ngingawuthandazela yini umthandazo wokuhlukanisa abantu ababili komunye umuntu?
Ngabe umkhuleko wokuhlukanisa abantu ababili usheshe usebenza njalo?
Uthando luyinto eyinkimbinkimbi kakhulu.
Uma uthando phakathi kwalaba bantu lungelona iqiniso, umkhuleko uzosebenza.
Noma yiluphi uthando olubuthakathaka, ngaphandle kokuzizwa noma uthando aluphuli kalula ngalezi imithandazo.
Bagcina ngokunganqabuki, ngemicabango yothando nangazo zonke izixhumanisi phakathi kwalaba bantu bobabili.
Yimibhangqwana kuphela enothando olunqunyelwe ukuthi isinde.
Ngaphandle kwalokho, uzokwazi ukuhlukanisa abathandi, isoka futhi ushade ezinsukwini ezimbalwa zomkhuleko.
Umkhuleko kuSan Alejo wokuhlukanisa abantu ababili nakanjani
Wena onesizinda sokuhlukile.
Konke okwenzekile okuzungeza abakhethiweyo beNkosi, ngiyakucela ukuthi ukhiphe (Umuntu wokuqala igama lakhe) kusuka (Kuqanjwe igama elilandelayo) Ukuhoxiswa, iSt Alejo, kuya ku- (Igama liyaphindwa).
Okokudlula kwakhe nokuphila kwakhe Ukuze angasikholwa silimale kakhulu. Ngiyakubuza, San Alejo, ukuthi nami ngiyakwazi ukufinyelela empilweni yakhe.
Ukuthi abakwazi ukuphatha ukusebenzisana, Ukuthi abafinyeleli ukuba ndawonye, ​​Akukho etafuleni lepikinikini, Noma esihlalweni sokuphumula, Noma egumbini lokuphumula ukuzwelana, Noma embhedeni ukulala Ungazizwa ubhavumula, unengwa futhi ucasukile, Futhi ikakhulukazi ngiyakubuza.
Ukuthi abakwazi ukunamathiselwa ethembeni. San Alejo, setha kwabo ngokuphelele.
San Alejo owaziwayo, njengowabusisayo obonakalayo ngicela ukuthi unginikeze isicelo sami ngokushesha okukhulu, Futhi ukuze umlingani wami abuye manje.
Ngiyabonga ngokungizwa, oyisibonelo San Sanjo, futhi nginikela izwi lami ukusabalalisa umthandazo wakho uma ungivumela ukuthi siphinde sithandaze umndeni wethu.
Kwangathi umphefumulo engikucela ukuba uhlukanise Ungabe usabuya ukuvela empilweni yami Amen.
Kunezimo lapho singenakumbona khona abantu ababili ndawonye, ​​ngasiphi isizathu futhi sifuna ukuba bahlukane, ukufeza lokhu ngokuphephile nangokuphumelelayo akukho lutho olungcono umkhuleko kuSan Alejo.
Kulesi sigwebo kufanele ube negama lalaba bantu ababili esifuna ukuhlukaniswa nabo njengoba kufanele ubasho phakathi komusho.
Kungumkhuleko oqondile lapho laba bantu ababili okukhulunywa ngabo bengabekezelelwanga, bengafisi ukuhlanganyela isikhashana enkampanini yomunye, ukuze kuthi khona kwalombhangqwana kuphazamiseke, ukuze bangabi nesifiso sokuhlangana futhi futhi kusukela emzuzwini owodwa kuya kolandelayo, bayazinyanya kuze kufike lapho bafika khona ngokwahlukana.
Lo mkhuleko unamandla amakhulu.Ngakho-ke, akuhloselwe ukuhlukanisa lo mbhangqwana isikhathi esithile, kepha kunalokho ukuthi ukwahlukana kucacile.
Umkhuleko wokuhlukanisa abathandi nakanjani
Hhawu, Santa Muerte ngiza kuwe ukukucenga ukuthi ungisize, ngidumele empilweni, nganika iminyaka yami enhle kakhulu endodeni engiyithandayo ehlukaniswe nami ukuba ishiye nomunye umuntu wesifazane ijezisa lowo wesifazane ongizwisa ubuhlungu, Ufuna ukucekela phansi umshado wami kude (negama lalowo muntu) ukuze abuyele kimi unomphela.
USanta Muerte, yenza (igama lalowo muntu) aqale ukumzonda futhi angamethembi, aqaphele ukuthi bayayisebenzisa, konke akufunayo yimali yakhe futhi ubumnandi bunaye ngenzalo, ngicela uhlukanise isithandwa sami kukho konke yini okumhlukanisa naye kimi izinyembezi ezingihlengelayo ngenxa yomunye, zibe zinhlupheko ezinzima kuye.
O, Girl White sebenzisa amandla akho ukukhipha lona omunye wesifazane kulo mdlalo, Santa Muerte ngicela ungilethe (igama lalowo muntu) ngalesi sikhathi esiphambi kwami ​​ungibuyisele imnene njengewundlu elincane, ukhohlwe igama omunye umuntu wesifazane ungenzela isidlo sezinyawo ngacela intethelelo.
Hhawu, uSanta Muerte uyakwenza lokho (igama lalowo muntu) akamelani nezifiso zami kwenza lokho engqondweni yakhe acabange nje futhi ngami ngicela isihe, intethelelo engifaka uthando lokuthi singaphinde sijabule njengakuqala ungangishiyi ngedwa uSanta Muerte .
Abathandi Baziwa njengomuntu wesithathu ongena ebudlelwaneni obuzinzile futhi bayinkinga esabekayo okufanele kubhekwane nayo ngokukhalipha.
Enye yalezo zindlela ukwenza umthandazo okhethekile lapho inhloso efunwayo ingatholakala ngaphandle kokubhekana nengxabano.
Lo mkhuleko wokuhlukanisa abantu ababili (abathandi) uzuze okuningi kokuzinikela ngenxa yokusebenza kwabo.
Uma usunemibono ecacile, qhubeka uthandaze, kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi, akukhathalekile ukuthi ukuphi, kunconyelwani ukuthi kufanele kwenziwe ngobuqotho obukhulu futhi, njengakuzo zonke izimo zemithandazo, ngokholo olukhulu.
Thandazela abantu ababili ukuba balwe futhi bazondane
USanta uCyprian, wena onamandla kunabo bonke abanamandla, ngicela usizo lwakho, uthando lwakho, sobabili senziwe ukuba sihlalisane, ngicela ungisuka kude kuye ku-1, ngidinga amandla akho kusetshenziselwe ukwehlukanisa laba bantu ababili.
Ungafuni ukubona, hlala kude, komunye nomunye. Ngiyazi ukuthi uyakwazi ukubusa uthando futhi uyazi ukuthi kunabantu abangazalelwanga ukuba baphile njengabo, banesiqiniseko sokuthi akufanele babe ndawonye, ​​ngiyafunga.
“Hhayi-ke, unamandla amakhulu, isibonelo senjabulo.
Ngithandaza lomkhuleko ukuze ngihlukanise labo bantu abangajabule, ngiyazi ukuthi angathokoza nami, ngiyazi futhi ukuthi lo mthandazo uzosebenza kahle, ngakho makube njalo.
Asibheki inzondo, singabantu abanokuthula abakholwa ngokuxoxisana ngazo zonke izikhathi njengendlela yokuxazulula izinkinga kungakhathalekile ukuthi bangobani noma kungani.
Manje, ngalo mqondo, le misho yenziwa ngenhloso Dala ubutha kulezo zimo lapho amandla amabi egeleza khona Ukungcolisa umuntu olungile.
Simandla yingakho kufanele sibanakekele bonke abasizungezile futhi singcolise nemvelo yekhaya lethu.
Uma lo mkhuleko wokucela abantu ababili ukuba balwe futhi bazondane senza phakathi kwelungu lomndeni ungcono kakhulu, ngoba amandla amahle azothatha amandla amaningi ekhaya ukuheha impendulo yomthandazo wethu.
Umkhuleko wokugcina wokuhlukaniswa
Nginikela la mazwi kubantu ...
Ukuthi manje bazulazula ingqondo yami, ukuze kuthi, lapho ngiqeda ukubabekezelela, kube nokuqumbelana kuphela futhi bangabe besakwazi ukuhlala ndawonye futhi.
Sengathi umzabalazo ungaba yingxenye yezimpilo zabo kusukela manje kuqhubeke futhi, Lapho ihora lesinqumo lifika, hlukanani ukuze ungaphinde uhlangane.
Ukuthi lokho bakha ubungani namuhla akulutho njengento yokuphumula nje nokuthi indlela yabo iya ngakolunye uhlangothi esikhathini esizayo Ukuze bangahlangani futhi.
Vumela lokhu kuwa noma kujule kweMiphefumulo yabo futhi ngithola engikucelayo ngokukholwa.
Kulokhu asiceli ubutha noma ikhefu lesikhashana.
Kulesi musho othize sidinga ukufeza a ukwehlukanisa okucacayo.
Ingasetshenziswa ezimweni eziningi zombili ebudlelwaneni bezothando nakulabo ubungane obumsulwa nobuqotho.
Kukhona abantu abathi yize benikeza umbono wokuba nezinhloso ezinhle ngaso sonke isikhathi baletha nentaba yamandla amabi noma izinhloso ezifihlakele ezingalungile neze.
Kulemikhuleko lo mthandazo uba yindlela yethu kuphela futhi ephumelelayo yokuphuma.
Ngingawuthandazela yini umthandazo wokuhlukanisa abantu ababili komunye umuntu?
Ungakhuleka kunoma ngubani ngaphandle kwemikhawulo.
Kepha sebenzisa umthandazo kuphela lapho kudingeka ngempela. Ungazami ukuhlukanisa imibhangqwana ngaphandle kwezizathu zayo.
Le mikhuba inamandla kakhulu futhi akufanele isetshenziselwe noma iyiphi injongo.
Sebenzisa umkhuleko kuphela ukuhlukanisa abantu ababili ngokuqondile nangokuhlukanisa okusheshayo ezimweni zesidingo sangempela.